China 30inch Steel unyi Ọkụ Ọkụ Imepụta na Factory | Chuliuxiang
30inch Steel unyi Ọkụ Ọkụ
[Na-adịgide adịgide] A na-eme olulu ọkụ n'èzí site na nchara ígwè na etiti siri ike, na-adịte aka.
[Multipurpose] Nhazi siri ike na ụkpụrụ pụrụ iche dị mma maka ikpo ọkụ, BBQ, bọket ice.
[Nhazi] Ọkụ ọkụ square mara mma nwere atụmatụ ahịrị ahịrị faux nkume mara mma.
[Nchekwa] Ihe mkpuchi ntupu na-ekpuchi ọkụ, na-egbochi ọkụ ọkụ ma ọ bụ irighiri ihe na-efe efe.
[Mgbakọ]Ọ dị mfe ịwụnye. Ihe mkpuchi efu maka idobe olulu ọkụ ọla a dị ọcha ma zere nchara.
Ị nwere ike iji unyi n'olulu ọkụ?
Inwe olulu ọkụ n'azụ ụlọ bụ ụzọ dị mma isi na ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi nwee ọnụ. Ọkụ ọkụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site n'olulu e gwuru n'ala ruo n'ihe ndị siri ike nke ígwè, brik, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ siri ike mee. Ma, ndị ọrụ na-enwekarị mmasị ịnwale ihe nwere ike ịgba ọkụ n'olulu ha, ọtụtụ ndị na-eche banyere unyi’ s irè na otu.
Ee, ị nwere ike iji unyi n'olulu ọkụ. Unyi bụ osisi na’a na-agba ọkụ na mpaghara ikuku oxygen, ma ọ ka nwere ike ịmekwu ọkụ, mepụta okpomọkụ, ọ bụkwa nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ isi nri n'ime ọkụ gị.
Enwere ụzọ ndị ọzọ esi eme ọkụ ọkụ gị, dabere na olulu ị nwere. Ka’s leba anya n'ụzọ dị iche iche esi eme mmanụ ọkụ.
Eji unyi na-eji ọkụ na-agbanye ọkụ
A na-emepụta unyi site n'osisi na-ere ọkụ nke nwere obere oxygen gburugburu. Ọkụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na-enwe mmasị iji ihe ahụ mee ihe maka ihe ndị a:
Dị mfe dị na zụrụ na ụlọ ahịa ọ bụla.
Ọ dị mfe ọkụ
Na-edobe oke okpomọkụ
Ọ dịghị isi anwụrụ ọkụ anaghị apụta, yabụ ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe, ụtọ anwụrụ ọkụ na-emeri’t imeri nri.
Ịhọrọ ụdị unyi nke ziri ezi
Enwere ụdị unyi dị iche iche dị.
icheku apịaji. Unyi a bụ nke a na-ahụkarị nke ị nwere ike ịzụta n'ụlọ ahịa nri ọ bụla. Ha na-agwakọta obere osisi na ihe ndị ọzọ dị ka mkpụrụ osisi, na mgbakwunye na ihe ndị na-ekekọta kemịkalụ na ihe ọkụ ọkụ na-enyere ya aka ịgbanye ngwa ngwa ma na-enwu ogologo oge.
Unyi a pịara ya na osisi na-ese anwụrụ. A na-etinye osisi na-ese anwụrụ, dị ka hickory, n'ime unyi iji nye ya ụtọ a na-ese anwụrụ mgbe ị na-esi nri. Ụdị unyi abụọ a na-enwe nkụ nwere a‘ọkụ egwuregwu’ ụdị.
A na-esi n'ọkụ nkụ dị ọcha eme ya nke agbaji ma kpọọ nkụ. Okpomọkụ na-esiwanye ike na enweghị kemịkal na-enye nri ka mma.
Uru Inwe Ọkụ Ọkụ
Gịnị kpatara ị ga-eji nweta olulu ọkụ? Aesthetics abụghị naanị uru inwe otu.
Nke gara aga: Ọkụ ọkụ propane dị n'èzí
Osote: Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ maka China dị ọnụ ala CE obere iko nwere ọkụ 3 ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ tebụl n'elu nri nri gas
Ọkụ ọkụ Diy Gas
ogige ọkụ olulu
Gas na Ọkụ Ọkụ
olulu ọkụ n'èzí
Oghere ọkụ Patio Gas
Seramiiki komado grills
Ogige mmanya mmanya 24-inch anwụrụ ọkụ grill
Mpịakọta unyi grill na ihe ndị na-ese anwụrụ
Ihe esi nri unyi n'èzí